Basa rekupakata zvigadzirwa
Kazhinji kutaura, chigadzirwa chingave nemapakeji akati wandei. Bhegi remazino rine mushonga wemazino kazhinji rine katoni kunze, uye kadhibhodhi bhokisi rinofanira kuiswa kunze kwekatoni rekufambisa nekubata. Kuisa uye kudhinda kazhinji zvine mabasa mana akasiyana. Nhasi, mupepeti ...
Iko kurongedza bhegi kuri nyore kutakura uye kunogona kushandiswa kubata zvinhu. Zvinhu zvakasiyana-siyana zvekugadzira, senge kraft bepa, chena kadhibhodhi, machira asina kurukwa, nezvimwe. Unoziva here kusarudzika kwehomwe? 1. Yekusimudzira yekupakata mabhegi Yekusimudzira mapakeji mabhegi akagadzirwa kuburikidza neiyo p ...
Chigadzirwa Kuisa chinotumirwa kumakatoni, mabhokisi, mabhegi, mablister, kuisa, zvitambi uye zvinyorwa etc. Chigadzirwa Packaging inogona kupa chengetedzo yakakodzera kudzivirira zvigadzirwa kubva mukukuvara panguva yekufambisa, yekuchengetedza uye yekutengesa maitiro. Kunze kwekudzivirira basa, chigadzirwa pa ...